vendredi, 08 janvier 2021 10:19
Vokatry ny “tiomena” : Rano iray bidon vidiana 2 000 Ariary aty Atsimo
Voatery manadio vovo isaky ny roa andro ny tompom-bovo noho ny fisian’ny tiomena aty Atsimo. Misy ireo vovon-drano no simba ka tsy azo ampiasaina intsony noho ny fanesorana fasika matetika loatra izay mampihotsaka ny ao anatiny. Nisondrotra, noho izany, ny vidin-drano ka sandaina 500-600 Ariary ny eran’ny bidon mavo iray, raha eny an-tanàn-dehibe.“Mahatratra 2 000 Ariary kosa izany any ambanivohitra raha mahita ho vidiana”, hoy ny mpampita vaovao iray any Ambovombe Androy. Lasa 6 000 Ariary kosa ny iray barika raha 3 000 Ariary na 4 000 Ariary ny vidiny mahazatra. Samy hafa amin’ny tiok'atimo ny tiomena, izay tafiotra miendrika tadio lehibe, miaraka amin’ny jofon-tany matevina.Tombanana ho 15 kilometratra isan’ora ny fikisahany, raha mahatratra 25 ka hatramin’ny 50 kilometatra isan’ora ny an’ny tiok'atimo.
Ny fanjakana, amin’ny alalan’ny Paositra Malagasy, no hanampy amin’ny famerenana amin’ny ampahany ny tahirim-bola napetrak’ireo mpikambana voafitaka tao anatin’ny fampindramam-bola madinika OTIV Boeny. Tsy maintsy mamerina ny vola nahodiny ireo rehetra mpitantana sy mpiasa voarohirohy tamin’izany ary hotohizana ny fanenjehana azy ireo araka izay voafaritry ny làlana. (Jereo Sary Tohiny)
Nandray ny adidy tandrify azy ny AM.MI « Ambanivolo Miakatra » tarihin'ny Filoham-boninahiny Rakotomamonjy Jean Rodriguez amin'izao andron’ny Noely izao, izay fotoana indrindra hifampizarana fitiavana sy ifanomezan-tanana. Amin’ny maha fikambanana miahy ny maha olona azy dia nahatsiaro manokana ireo mpiray tanindrazana ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo aty amin'ny faritra atsimon’ny Nosy ny AM.MI. Notanterahina ny andron’ny Krismasy 25 Desambra 2020 izany, ka ireo zokiolona, vehivavy mitondra tena, terabao, kilemaina ary ankizy tamin'ny tokantrano miisa 600 teo no nisitraka izany fanampiana izany tao amin'ny Fokontany Ampary sy Andaza, Kaominina Anjampaly, Distrika Tsihombe. Vary 200kg, rano 800 litatra, miampy legioma 6 taonina ary bisiky 17 baoritra no nozaraina tamin’izany, sady nirary fety sambatra ho an’ny Malagasy rehetra ny AM.MI. (Jereo Sary Tohiny)
Olona sahirana sy tsy manan-kialofana nanodidina ny 70 teo ho eo no nisitraka ny fanampiana avy amin'ireo mpiasan'ny Tahirim-bolam-panjakana Antsirabe, ny harivan'ny Alarobia 23 Desambra 2020. Hetsika efa fanao isan-taona ity notontosaina ity, ary in-droa isan-taona no hanaovan'izy ireo izany raha ny fanazavana nomen-dRtoa Randriamiharisoa Volatahiana, tompon'andraikitra voalohanany ao Antsirabe, hatramin'ny taona 2013.
Nankalaza ny Noely 2020 ny Akany Zandarimaria eny Arivonimamo. Notontosaina teny an-toerana ny marainan'ny 21 desambra 2020 izany. Tonga nanome voninahitra izany ny Jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka Komandin'ny Zandarimariam-pirenena (COMGN) sy Ramatoa Sahondra Ravalomanana Vadin'ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, notronin'ireo manamboninahitra maro sy mpikambana ao amin'ny FIVAZA, ary ireo manankaja avy ao an-toerana sy Antananarivo. Nanambara ny Jeneraly COMGN fa manao latsakemboka isam-bolana ny Zandary rehetra amperin’asa mba hampiodinana ity Akany ity. Tsy fiompina zaza ny Akany fa fitaizana sy fanabeazana mba ananan’izy ireo fahaleovantena any aoriana, ka hahatonga ho olom-banona azy ireo. Takiana amin’ireo ankizy ny ezaka amin’ny fianarana sy ny fanarahana ny fitsipi-pifehezana.
Tonga nanolotra fanomezana sy fampitaovana ho an’ny Akany Fanantenana aty Antsirabe ny vadin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta, tarihin-dramatoa Ntsay Léa, vadin’ny Praiminisitra, izay nosoloin-dramatoa Ravalomanana Sahondra tena, ny vadin’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ary tonga nanotrona izany lanonana izany ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra mivady. Toby fitaizana eo ambany fiahian’ny ministeran’ny Fitsarana ny Akany Fanantenana, izay manabe ankizy enjehin’ny lalàna, vokatry ny heloka maivana, na koa manana olana amin’ny fiaraha-monina. Amin’ny ankapobeny dia 10 hatramin’ny 17 taona no raisina ato amin’ity akany ity, ka mbola voafetra eo amin’ny fandraisana olona miisa 30 ny fahafahan’ny akany hatreto.
Photos Croix Rouge
Madagascar : la Croix-Rouge se mobilise contre la crise d’insécurité alimentaire
La Croix Rouge Malagasy et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) se mobilisent pour venir en aide à 10 000 personnes souffrant de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans la commune d’Ambatoabo, région Anosy. Cette opération d’urgence, d’une valeur de 249 900 Francs suisses s’étale sur une période de trois mois, à compter du mois de décembre, et vient renforcer les actions humanitaires initiées par le gouvernement et d’autres organisations partenaires sur place.
Voamarina fa 10% ny mponina eto Madagasikara dia mifaingosela na voan’ny« drépanocytose » avokoa araka ny fanadihadiana nataon’ny teo anivon’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Mbola maro ireo tsy mahafantatra ny aretina faingosela, izay aretin'ny selamena ka mety hanapaka lalan-drà na hahatonga tsy fahampian'ny rà ao amin'olona iray. Misy ny atrikasa ho fankatoavana ny paikady nasionaly ho an'ny ady atao amin'ny faingosela teo anivon'ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka androany Talata 15 desambra, ahafahana mandrindra ny andraikitry ny tsirairay mba ahazahoan’ireo marary misitraka ny fitsaboana sahaza azy ireo.
Nidina teny amin’ny tsena Isotry sy Mahamasina nanara-maso ny vidim-bary nafarana avy any ivelany, androany 11 Desambra 2020, ny avy ao amin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Varotra Anatiny (DCI), sy ny Foibem-paritra Analamanga misahana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana (DRICA Analamanga). Efa miparitaka eny an-tsena ny vary nafarana avy any ivelany amin’ny vidiny 550 Ariary ny kapoaka. Nambaran’ny Tale misahana ny Varotra Anatiny ihany koa fa misy ny vary tonga ao Toamasina amin’ny vidiny mirary hamatsiana ny faritry ny Nosy. Hitohy hatrany ny fanaraha-maso ny vidin’entana ho fitsinjovana ny mpanjifa. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 10 décembre 2020 11:52
Tsena sy fanjifana : Noferan’ny fanjakana ho 79 000 Ar ny gonim-bary, tsy hiakatra ny vidin’ny menaka
Taorian’ny famerana tsy hihoatra ny 550 Ariary ny vary iray kapoaka ho an’ny mpanjifa, dia nanao tatitra ny filankevitry ny minisitra ny 09 desambra 2020 fa nifanekena tamin’ny mpanafatra fa 79 000 Ariary ny gonim-bary tokony alefa eny amin’ny tsena ankehitriny. Misy 500 000 taonina ny vary nafarana miaraka amin’ireo mpandraharaha Malagasy amin’ity taona 2020 ity, ary ampy tsara izany ho amin’ny filan’ny mponina hiatrehana ny maitso ahitra. Araka ny tatitra hatrany, dia tsy hiakatra ny vidin’ny menaka sy ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro araka ny fifanekena tamin’ireo orinasa mpamokatra sy ireo orinasa mpanafatra izany. Tsy tokony hisy ny fiakaran’ny vidin’entana eny an-tsena mandritra izao fety izao, indrindra ireo sakafo ilaina andavanandro, ary hihatra ny sazy amin’ireo izay mandika izany.